DF oo afar qodob kasoo saartay arday sabab yaab leh uga baaqaneysa imtixaanka – Benaadir News Network
DF oo afar qodob kasoo saartay arday sabab yaab leh uga baaqaneysa imtixaanka
Muqdisho (Benaadir News) – Benaadir News ayaa dhawaan baahisay xog la xiriirtay in boqolaal arday ah uga baaqan karaan gelida Imtixaanka Shahaadiga ah ee dugsiga sarre, kadib arrin yaab leh oo ay ku kacday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
Waaliidin badan oo xiligaas la hadlay Benaadir News ayaa u sheegay in ardaydooda oo Iskuulka joogay muddo aan ka yareen 12 sano in laga waayay liiska ardayda Imtixaanka galaya oo ay shaacisay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, markii la baarayna ay ogaadeen in loo qoray “Dropout” oo loola jeedo in ardaygu uu ka haray waxabarashada ama Iskuulka.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo arrintaas ka jaawabeysa ayaa xalay qoraal soo saartay, kaasi oo ay ku sheegayso in dib loo eegayo cabashada ardeyda sida qaldan looga reebay liiska ardayda Imtixaanka galaysa.
Qoraalka kasoo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in waalidiinta iyo ardeyda cabaneysay ay dhageysteen maamulka wasaaraddu, islamarkaana lagu xaliyey afar qoddob oo kala ah;
1. In la diiwaan geliyaya cabashadooda
2. In cabashadooda laga jawaabi doono muddo ku siman laba toddobaad
3. In lala wadaagi doono Natiijada baaritaanka xogtooda
4. In imtixaan gaar ah laga qaadi doono kuwa xogtoodu ay sax noqoto
“Wasaaraddu waxaa ay la wadaageysa warkaan farxadda leh ardayda, waalidiinta iyo maamuladda iskuulada ee ay dhigtaan ardayda kasoo cabatay in aysan ku jirin ardeyda gelaysa imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020-2021-ka, waxaana ku dhiira-gelinayaa ardayda inay dadaal muujiyeen,” ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda.
Benaadir News ayaa dhawaan xaqiijisay in ugu yaraan 130 arday ah oo ku nool magaalada Muqdisho ay wajahayaan halistaas weyn oo ay uga baaqan karaan Imtixaanka Qaranka ee dugsiga sare, kaasi oo Sabtida ka billaaban doono Muqdisho.
Waalidiinta wajahaya dhibaatadaan ayaa Benaadir News u sheegay in Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ay u sheegtay in Iskuulada iyo Dalladaha aysan usoo gudbin magacyada ardaydooda oo ay u raadsadaan.
Ardayda iska waayey liiska wasaaradda ayaa qaarkood si buuxda u dhigan jireen Iskuullada, islamarkaana ay kaalmo hore ka geli jareen Imtixaanaadka Iskuulada qaadaan. Ardayda qaar ayaa Benaadir News aragtay oo natiijo wanaagsan ka keenay Imtixaanka dhexe ee Iskuulka (mid-term exam).
Previous Mareykanka oo DF iyo dowlad goboleedyada faray hal arrin kadib heshiiskii doorashada
Next Heshiiska doorashada Dhuroobe ayaa u dhashay, Dhagarqabena waa ka dhintay